Nddị & ọchụchọ maka isiokwu na isiokwu:egwuregwu vidiyo
Next-gen PlayStation VR: 4K na anya nsuso?
2021-05-11 Egwuregwu vidi...
PlayStation VR ọhụrụ ahụ nọ na Sony. Mgbe ọtụtụ mmegiderịta, ọkwa ọkwa PSVR nke ọkwa ọkwa PlayStation izu ole na ole gara aga. Maka oge ahụ, onye nrụpụta Japan gosipụtara ndị na-achịkwa ya ga-eso isi ekweisi eziokwu ahụ. Na usoro ihe omume ahụ, nzaghachi haptic, ihe ngbanwe na ihe ọhụrụ, na-egosi mg
Ọnụ Balzọ Balmá Baldur: Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị iji nweta ọdụ ụgbọ mmiri PC mgbe afọ 20 gachara na njikwa
Nke a bụ nnukwu ozi ọma maka Fans nke Baldur's ọnụ ahịa aha na ihe doro anya karịa Dark Alliance wepụtara na 2001 na PS2, Xbox, GameCube na Game Boy Advance. Ihe omuma a ma ama bu nslash kariri ihe ndi ozo n'egwuregwu ndi ozo n'uwa nke na-elekwasị anya karia ihe RPG ka natara ugbua ohuru. Ọ bụ dị ir
PS5: ọ na-esiri ike ịchọta na 22 2022?
PlayStation 5 bụ otu n'ime ngwaahịa ndị ahụ na-adịghị ahụkebe nke ị nwere mmasị karịa karịa mgbe ịnweghị ike inweta ya. Kemgbe ewepụtara ya na Nọvemba 19, 2020, ọ rere ihe karịrị nde 7.8 n'agbanyeghị na ọ ka siri ike ịchọta na ahịa ahụ. Dabere na Hiroki Totoki, onye isi oche nke Sony Corporation, nj
Microsoft kpughere ndị Europe akụkọ na Xbox Game Pass na ọmụmụ ihe
Microsoft ka kesara nsonaazụ nke ọmụmụ na Xbox Game Pass na otu ọrụ si emetụta ndụ ndị egwuregwu na Europe. A na-eduzi ọmụmụ ihe a na Disemba 2020 na ndị egwuregwu Xbox ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-aza 14,000, bi na mba dị iche iche dịka France, Poland na Spain. Anyị nwere ike ịchọpụta na na
Roomlọ 4: Mmehie ochie na-enye echiche nke LEGO banyere ụlọ obibi ụlọ ochie
Ime ụlọ aha ama ama maka egwuregwu vidio ya dị egwu nke na-eme ka ndị egwuregwu nwee ikuku pụrụ iche na omimi. Ihe edere na ụbọchị a bụ Room 4: Old Sins wepụtara na 2018 na iOS na gam akporo tupu ọ rute na PC ọnwa atọ gara aga. ihe ojoo ochie ulo ojoo nke ichoro ime na ihe obula. Dabere na